स्टिम न्युज वि.सं १ भाद्र २०७६, आईतवार १७:५२
मलेसिया: एनआरएन मलेसियाको महासचिवमा व्यवसायी हेमराज सापकोटा चयन हुने पक्का भएको छ । महासचिव संगै सम्पूर्ण पदमा निर्बिरोध हुने पक्का भएको हो ।
निर्वाचन समितीले सहमति बाटै नाम र पदबारे पुन: बिचार गर्न समय उपलब्ध गराको थियो उक्त समय सिमा भित्र सबै पदमा सहमतिकै आधारमा नाम समाबेश भएपछी सबै पदमा निर्बिरोध चयन हुने पक्का भएको हो ।
नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्षमा हरि प्रसाद भटराई, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा लाल बहादुर आले (सुन्दर), केन्द्रिय सदस्यमा केशव कान्त झा लगायत सम्पुर्ण टिम निर्विरोध चयन भएका छन ।
मलेसियामा यहीँ आउदो ०१ सेप्टेम्वर २०१९ आईतवार हुन गैइरहेको गैर आवासीय नेपालि संघ मलेसियाको छैटौं अधिवेशनमा महासचिव को लागि निर्बिरोध चयन भएका सापकोटासँग गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाको अधिबेशनको सेरोफेरोमा रहेर स्टिम न्युज टिमले कुराकानी गरेको छ ।
पर्बत जिल्लाको मुडिकुवा रुग्दी का हेमराज सापकोटा १३ बर्ष यता मलेशियामा छन । सापकोटा यस अगाडीपनि शंकर बाहादुर पौडेल अध्यक्ष रहेको कार्यकालमा केन्द्रिय सदस्य र नि-बर्तमान अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने को कार्यसमितीमा पनि केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारी निभाइरहेका थिए।
मलेसिया आउदा साधारण कामदारको हैसियतमा मलेसिया आएका सापकोटा यति बेला मलेसियामा एक सफल व्यावसायिको रुपमा चिनिन्छन। सानैदेखि फरक स्वभावका उनी कसैमाथी अन्याय भएको देख्न सुन्न नसक्ने एउटा कुसल नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्थे। चाहे बिद्यालय मा होस चाहे ती गाउँ घरमा एउटा खालको छुट्टै सहास सापकोटामा थियो।
वैदेशिक रोजगारीको लागि २००६ मा श्रमिकको रुपमा मलेसिया आएका सापकोटा ३ बर्ष कम्पनी को काम गरे। छिटै साथीहरू सङ घुलमिल हुनसक्ने सापकोटा कम्पनीमा रहदै थुप्रै साथीहरू सँग चिनारी र सम्बन्ध बसिसकेको थियो बिस्तारै केही समय पछि 2009 देखि मलेशिया मा नेपाली सामान को व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका सापकोटा अहिले मलेसियामा एक सफल व्यवसायि भनेर चिनिन्छन।
हेमराज जि नमस्कार कस्तो लागिरहेको छ चुनावी माहोल तपाइलाइ तपाइँ महासचिव निर्बिरोध हुनु भयो है ? खास केको लागि तपाईं महासचिव ?
हजुर यो एउटा् निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया हो महासचिवको उम्मेद्बारी दर्ताको गराएको छु । मेरो बुझाइ आज को दिन सम्म मलेशियामा गैरआवासीय नेपालि संघ (NRNA) ले सकेसम्म श्रमिक हरुको लागि पनि केही राहत हुने राम्रा काम हरु त गर्दै आएको छ। तर जति र जुन गतिमा धेरै भन्दा धेरै श्रमिक हरुको बिच मा परिचित हुनु पर्ने थियो त्यो अलिक हुन सकेको छैन। अब हामिले यो NRNA सबै नेपाली हरुको साझा सस्था हो भन्ने माहोल बनाउनु पर्ने छ । त्यसको लागि महासचिव को जिम्मेवारी,कर्याधिकार लाई आत्मासाथ गर्दै राम्रो भिजन र मिसन बनाएर काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मबिश्वास ले नै म नेतृत्वमा आउन खोजेको हो खासमा । साथीहरूले पनि मेरो यो सोचाइलाइ बुझेर निर्बिरोध चयन गराइदिनु भयो त्यसको लागि आभारी छु
के यो पटक चुनाव नै हुन्छ होला भन्ने आशंका थियो ? राजनैतिक चलखेल को प्रभाव छ भनिन्थ्यो हैन र ?
हजुर सकेसम्म सबैको सहमतीमा सबैलाई मिलाएर सहि नेतृत्व गर्न सक्ने टिम बनाउने हाम्रो प्रयास थियो। सहमती अबस्य हुन्छ भनेर काम गरेका थियौं । तर माहोल हेर्दा केही पार्टीगत राजनीति को प्रभाव कहि कतै परेको आभास हामिलाइ पनि भएको थियो । यो हुनु सबैको लागि राम्रो हैन। यसले NRNA को निर्वाचन पछी पनि काम गराइलाइ असर गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । त्यसैले सबै मिलेर जाउ भन्ने कुरा मा मेरो लगायत सबैको जोड भएका कारण यो सम्भव भयो । सहमतिय प्रणाली बाटै यसलाइ हामीले टुंगायौं । यो नै सबै टिमको र मलेसीयामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको जित हो भन्छु म ।
तपाइले भने जस्तै महासचिव को जिम्मेवारी मिल्यो अब तपाइँको तर्फबाट आम श्रमिकले के अपेक्षा राख्ने ?
हजुर, महासचिब को जिम्मेवारी पाएको छु । अब मैले NRNA को उदेश्य अनुरुप कर्ययोजना हरु त धेरै छन म सङ बुदागत रुपमा भन्नुपर्दा
१) सम्पुर्ण मेम्बर हरु संग सस्थाको लक्ष्य र कार्यदिशा स्पस्ट पार्दै सचेतना मुकल कर्यक्रम हरु गर्ने ।
२) सामाजिक काम गर्दै आएका विभिन्न संघ सस्था संग सल्लाह,सुझाब लिदै सहकार्यको साथ अगाडि बढदै नेपाली दूतावास र NRNA को क्षेत्रिय कमिटीहरुको बीचमा राम्रो समन्य गरि समस्या कलेक्सन र समाधनकोलागि पहल गर्ने।
३) मलेशियाका ४ लाख श्रमिकहरुले लागानी नेपालमा हाम्रो सस्थाको लगानी बाट संचालित सस्थामा लगानी गर्नको लागि प्रेरित गर्नेछु ताकी श्रमिक पनि मालिक बन्न सकुन भन्ने उदेश्यले।
४) मलेशिया धेरै नेपाली हरु सुतेको अबस्थामा अरु अन्यकारणले मृत्यु हुने घटना छ त्यस्को अध्यन र समाधान को पहल गर्ने छु।
५) मलेशिया नेपाली हरुको बाहुल्य भएका राज्य हरुमा क्षेत्रीय समिती हरु गठन गर्ने पनि मेरो प्रथमिकता भित्र पर्नेछ।
६) लगायत सस्थाको नयाँ बन्ने समिती को सम्पुर्ण मेम्बर ज्यु हरु सङ को साथ र सहयोग मा अरु धेरै काम हरु गर्ने योजना हरु छन।
अन्तिम प्रश्न यि सबै काम गर्छु भनेर कसरी बिस्वस्त पार्नुहुन्छ ?
यो सस्थाको नेतृत्व टिममा मा पुगेको पछि मेरो मिसन भनेको श्रमिकको हकहित र उहाँ हरुको अधिकार र NRNA ले गर्न सक्ने र गर्न मिल्ने किसिमको कार्यक्रम मा जोड दिने नै पहिलो प्रथामिकता मा पर्ने छ। “”म हुनेखाने भन्दा पनि हुँदा खाने मान्छे को बर्ग मा पर्दछु””। सायद परिचीत साथीहरूलेत प्रारम्भिक निर्केल गरिरहनु भएकै होला । यहाँनेर चरीत्र माथी ठुला दाग लागेका ,श्रमशोषण गर्ने, श्रमिक का मुद्दा बेवास्ता गर्दै श्रमिकको ब्यबसाय गर्ने हरु नेतृत्व को दाबेदार पछी हटेका छन छन । सस्थामा श्रमिक बर्गको नेतृत्वको आवस्यकता महसुस गर्नुहुने । सम्पुर्ण समर्थक साथीहरूले राम्रो संग बुझ्नु भएको छ। म कुन क्षेत्र बाट आएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएकै कारण पनि विश्वस्त छु। र सँस्था र आम श्रमिक को पक्षमा आफू रहेकोले पनि थप बिस्वस्नियताका आधार छन जस्तो मलाइ लाग्छ।
वि.सं २२ भाद्र २०७७, सोमबार ०६:३७
विदेशबाट आउनेलाई होटल क्वारेन्टाइन
वि.सं ७ भाद्र २०७७, आईतवार १८:३०
निगमको जहाज दुबई उड्यो, दुबईमा रोकिएका २५० नेपाली लिएर फर्कने
वि.सं ७ भाद्र २०७७, आईतवार ११:२३